IMac Pro Space Gray Qalabka La Iibinayo Inta Kaydka Ugu Dambeeyay | Waxaan ka socdaa mac
Waxay ahayd waqti kahor kahor Apple sidoo kale waxay go'aansatay inay ka saarto qalabka cawlan ee cirifka ah ee la socda iMac Pro dib loogu soo celiyay liiskeeda iibka. Shirkaddu waxay go'aansatay inay tahay waqtigii iMac cawlan uu ka bixi lahaa iibka si loogu banneeyo moodello cusub. Hadda qalabkaaga taas gooni ayaa loo iibsan karaa sidoo kale maalintoodu waa tirsantahay.
Haddii aad jeceshahay midabka cirro-bannaan ee bannaan waa inaad ka faa'iideysataa, maxaa yeelay Apple waxay go'aansatay inay tahay waqtigii qalabyada ku jira midabkaas oo ay weheliso iMac Pro, ay la mid tahay masiirka kombuyuutarka. Sidan ayaad mid uun ka heli kartaa qalabkani inta kaydku socdo. Sida aan ku aragno gudaha jiirka, kiiboodhka ama bogga iibka trackpad Midabadaas, waxaa nalooga digay in xilligan aan heysanno cutubyo iib ah, laakiin markii kaydku dhammaado, waxaan kaliya ka iibsan karnaa dhinacyada saddexaad ama gacan labaad.
Waa tallaabo lama huraan ah, ka dib markii la joojiyay kombiyuutarkaaga iMac Pro .. Markii midabbadaas la iibiyo, waxaa lagu heli karaa oo keliya ikhtiyaar lacag ah.
Tufaax waa ka tagida qolka moodooyinka cusub waa inay yimaadaan si ay u bedelaan moodelladii hore. IMac Pro wuxuu ka mid ahaa dhibanayaashii ugu horreeyay oo hadda qalabka isku midabku wuxuu ku dhacaa qaddar isku mid ah. Waa inaan siino mustaqbalka, iMac-ka cusub ee leh M1 kaas oo aan horey ugu haysanay moodal suuqa iyo midabbo iyo qalabyo kala duwan oo iswaafajin kara. Qaab aad u Apple ah, waxay leeyihiin wax walba oo aad ku habboonaato isla midabbada. Wax shaki la'aan noqon doona fikrad wanaagsan mustaqbalka iMac Pro.
Hada hadaad rabto ama aad jeceshahay qalabka kujira meeshaas midabka cawliga ah, haka waaban oo hada hel, intaysan dhammaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » IMac Pro Space Gray Accessories iibka inta alaabtu socoto
Diyaarad AirTag ah ayaa ku heleysa bushkuleeti dhac tuugo ah